Ka Digtoonow Soodejinta Qoraallada Falanqaynta Google ee Badan | Martech Zone
Iyadoo la adeegsanayo qalab aad u tiro badan nidaamyada maaraynta maaddooyinka, waxaan aragnaa in badan oo ka mid ah macaamiisheenna oo leh arrimo la xiriira qoraallada Google Analytics ee lagu geliyay bogga dhowr jeer. Tani waxay burburinaysaa adiga Analytics, taasoo dhalisay warbixin aad u badan oo soo booqdayaasha ah, bogag booqashadiiba iyo ku dhowaad xaddiga boodboodka.
Maanta uun waxaan haysannay macmiil ay ku xirnaayeen 2 plugins oo loo qaabeeyey in lagu daro qoraalka 'Google Analytics' ee loo yaqaan 'blog'. Oo midkoodna plugin dhab baaray si loo arko haddii uu horey u jiray qoraal la raray! Natiijadu waxay noqotay in booqashooyinka ay ahaayeen kuwo si xad dhaaf ah loo soo sheegay oo heerka soo-kabashadoodu ay ahayd ilaa 3%. Haddii heerkaaga soo kabashada uu hoos ugu dhaco wax ka yar 5%, naso oo hubso inaad haysato arrin ku saabsan qoraallo fara badan oo ku yaal boggaaga.
Marka laga reebo falanqaynta, sidee ku ogaan kartaa inaad sidan sameysay? Hal dariiqo ayaa ah in si fudud loo eego isha boggaaga oo aad raadiso ga.js. Xitaa haddii aad rabto inaad kormeerto goobta koontooyin badan oo Google Analytics ah, waa inuu jiraa hal qoraal oo keliya.
Hab kale ayaa ah inaad ku furto qalabkaaga soo-saare ee biraawsarkaaga oo aad u fiirsato isgaarsiinta shabakadda ka dib markii aad bogsiiso bogga. Miyaad aragtaa qoraalka ga.js oo la codsaday in ka badan hal jeer?
Google Analytics wuxuu ku shaqeeyaa adoo raacaya qoraal uruurinaya dhammaan macluumaadka, ku kaydin doona macluumaadka kumbuyuutarrada kumbuyuutarka oo u diraya server-yada Google codsi muuqaal ah. Marka qoraalka la rakibo wax ka badan hal jeer, mararka qaarkood wuxuu dib u dulmarayaa cookies, wuxuuna u dirayaa server codsiyo badan oo muuqaal ah. Taasi waa sababta heerka cigta aad ayuu u yar yahay… haddii aad booqato in ka badan hal bog oo bogga ah, kama boodaysid. Marka… haddii qoraalladu ay wax ka ridayaan wax ka badan hal jeer markii aad booqato hal bog, waxay ka dhigan tahay inaad booqatay bogag badan.
Hubi boggaaga iyo kanaga Analytics si loo hubiyo in aad Analytics qoraalka si sax ah ayaa loogu rakibay bartaada, oo hubi inaadan si qalad ah u raacin qoraalka wax ka badan hal jeer. Haddii aad sameyso, xogtaadu sax maahan.
Tags: heerka cigtagaga.jsAnalytics google
Oktoobar 3, 2012 at 3:32 AM
Mahadsanid, waan ka fiirsan doonaa tan. Waxaan u maleynayaa in tani ay tahay sababta aysan e-meheradeyda e-commerce runti u lahayn taraafikada ku socota warbixinteeda falanqaynta. qoraalka google wuu ka duwan yahay koodhka raadraaca ee ku jira warbixintiisa gorfaynta google. mahadsanid sxb.
Nov 14, 2013 at 6: 21 AM
Hi Douglas, aragti weyn. Waxaan lahaa hoos u dhac tan la mid ah tan iyo markii aan bilaabay tijaabooyinka qaar ka mid ah Maareeyaha Google Tag Todobaadyo ka hor: 4 Bog / Booqashooyin 🙂 oo dib ugu laabo hadda oo ah 0.47% 😀
Ka dib boostadaada, halkan natiijadayda:
1.Script: Waxaa jira 1 ga.js (Waxaan ku dhajiyay kaliya koodhka Analytics iyo Tag Manager boggeyga). Ma arki karo qoraalka labaad (Tag Manager) tixraac kasta oo ga.js laakiin kaliya gtm.js. Ma lihi lambar weyn oo kaliya kuwa 2 lagu dhajiyay (falanqaynta koowaad, ka dibna TM), markaa xitaa uma baahni inaan isticmaalo codsi, si kastaba ha ahaatee waxaan ku hubiyey dab-damiska sidoo kale.
2. Maamulaha Tag Tag Console waxaan ku abuuray hal dhacdo oo kaliya (isla waqtiga abuurista, isla waqtiga bilowga br br). Dhacdadani waxay asal ahaan u shaqeysaa sida dhagsiyaha Link guji ee Xiriirrada Dibedda waxayna u egtahay midkii uu James Cutroni kula taliyay boggiisa. Laakiin waxaan sameeyay isbadal yar: Mid ayaa ah Isdhexgalka Isdhaxgalka oo loo dhigay Run (taasi waa inaan lagu dhufan sicirka boodka?) Laakiin markaa waxaan ku daray Label = tixraac halkii aan uga tagi lahaa meel maran, maxaa yeelay waxaan doonayay inaan ku ogaado halkaas qasabadaha Xagee ka timid. (Sikastaba waan ka saaray maanta maadaama aysan waxtar u lahayn sidaan u maleeyay)
3. Weli waxaan hayaa xoogaa xiriiriyeyaal dibedda ah oo duugoobay onClick = ”_ gaq.push ()” oo gundhig ah laakiin dhammaantood waxaa loo dejiyey Is-dhexgal la’aanta ku dhufo run.